Ụbọchị My Pet » 5 Ndi na Don'ts ihe ịga nke ọma Online dịwara
site April Aragam
emelitere ikpeazụ: Nov. 20 2020 | 3 min agụ
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị aghọwo otu n'ime ndị kasị ewu ewu ụzọ izute ọhụrụ ndị mmadụ. Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị, dị ka ihe ọ bụla ọzọ, nwere ya mma na-adịghị mma ihe. Ya mere olee otú ị pụrụ ime ka ọ a ịga nke ọma n'ihi onwe gị? Isiokwu a na-akọwapụta 5 eme na don'ts ga-enyere gị ịnyagharịa online akpa a obere ihe were were.
Of: Dejupụta mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ
Ọ dị mkpa ka ịza ajụjụ a mkpakọrịta nwoke na nwaanyị profaịlụ. Nke a bụ nke mbụ ohere ndị mmadụ na-ịmụta a bit banyere gị. Ị na-adịghị na-agwa gị dum akụkọ ndụ, ma ị chọrọ inye dịkarịa ala a di na nwunye mkpa eziokwu. Na banyere m ngalaba banyere ị chọrọ banyere ma ị na-arụ ọrụ ma ọ bụ na-aga akwụkwọ, ihe ị na-enwe na-eme na gị free oge, na banyere ihe a bit pụrụ iche na-eme ka ị dị iche n'ebe ndị ọzọ. Ị ọrụ afọ ofufo a ofe kichin ugboro abụọ n'ọnwa? Ka i nwe a akwụkwọ osisi na na-agụ ochie? Kwuo ya! Ọ pụrụ iyi ka obere gị ihe, ma onye na-agụ profaịlụ gị ọ ga-enyere gị aka iguzosi si ndị ọzọ.
Emela: Ekwu banyere gị na-enwe olileanya na nrọ ka a mmekọrịta
Ọ bụ n'ụzọ zuru okè mma banyere ma ị na-achọ a ukporo mmekọrịta ma ọ bụ ihe ndị ọzọ na-adịte. Ị chọrọ izute onye chọrọ otu ihe ahụ. Ọ bụrụ na ị na-amalite na-ekwu banyere otú ị na-aga na-emefu gị na mbụ Christmas ọnụ, ụdị agbamakwụkwọ na ị na e ná nrọ nke, ma ọ bụ otú ọtụtụ ụmụaka na ị chọrọ nwere, ị na-aga mmenyenjo nwere ụbọchị anya. Ahapụ ndị na-mkparịta ụka maka mgbe ị na-aghọ ndị ọzọ dị oké njọ.
Of: Tinye na-adịbeghị anya photos
I nwere ike na-ahọrọ na foto nke ị na iwere afọ atọ gara aga n'ime ogige ahụ mere ị na-eche dị ka a bombshell, ma ọ bụ ihe dị mkpa na-eji a ọzọ na-adịbeghị anya foto. Ndị mmadụ na-agbanwe oge na-aga n'agbanyeghị na i nwere ike na-arụ ụka na ị ka na-ele anya dị nnọọ ukwuu dị ka ochie foto. Ntutu gị agba, ogologo, na ịke eleghị anya gbanwere. Ị nwere ike n'ala ma ọ bụ na-etinye na a ole na ole pound. Ọbụna onwe gị ịke nwere ike gbanwere. Ọ bụrụ na ị biputere a na foto ma izute onye na onye, ị maara na ha na-aga na-atụ anya na onye na foto. Chee echiche banyere otú ị ga-eche na ọ bụrụ na onye ị na-ezute nwere elu a abụọ afọ foto ebe o nwere ntakịrị ihe ntutu na a obere obere afọ. Ọ na-adịghị eme ka ndị mmadụ elu elu chọọ ịmata ndị ha na ha na-ezute.
Emela: Chere kwa ogologo izute
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na saịtị nwere ike ịbụ oké ebe izute ọhụrụ ndị mmadụ, ma eleghị anya ị na-achọghị mmekọrịta ịnọ online maka ọnwa na ọgwụgwụ. Ọ dị mkpa ka gị mmekọrịta ọhụrụ site na online ka na onye. Ozugbo ị gbanwere ozi ịntanetị na akụkụ ị pụrụ ịkpali ndị ọzọ nzọụkwụ, nke a na-ekwu okwu na ekwentị. Ọ bụrụ na ị ka na-eche na njikọ na chọrọ izute, eme ka a ụbọchị! Ọ bụrụ na ị bi n'ebe dị anya na-apụghị nnọọ ụgbọala izute onye ọ bụla ọzọ, dịkarịa ala Skype ruo mgbe ị nwere ike.
Of: Atụkwasị obi gị gootu
Ọ bụrụ na ị ga-esi na-akpa ọchị mmetụta banyere onye bụ n'ihi ihe ndị ọ na-kwuru ma ọ bụ site na-eme a ndabere ego ị na hụrụ ihe na-adịghị tinye, ntụkwasị obi na mmetụta. Ị nwere ike na-ajụ ajụjụ banyere ya, ma ọ bụrụ na ị ka na-eche dị ka ihe na-apụ, ọ bụ oge iji kwado ma izute ọhụrụ ndị mmadụ. Ị adịghị chọrọ na-eji mmalite nke a mmekọrịta ọhụrụ sorting si ụgha ma na eziokwu na mgbe niile na-eche na ọ bụrụ na-esote ihe n'ọnụ ya pụta bụ ihe na-abụghị eziokwu. Always atụkwasị obi gị gootu mmetụta.
Online mkpakọrịta nwoke na nwaanyị ga-enwe mgbe nile a ezigbo ride. Ị ga na-emehie ihe mara mma maka oge ọzọ.